Iyo iPhone 7 inotarisana neyekucheka, iyo yakareruka uye iyo bendgate mune aya ekutsungirira bvunzo | IPhone nhau
Iyo iPhone 7 inotarisana neyekucheka, iyo yakareruka uye iyo bendgate mune aya ekutsungirira bvunzo
Sezvo chero muverengi weNews News anofanira kuziva, nhasi iyo Iphone 7. Nemayunitsi ekutanga atova mumaoko evane mukana wekutanga, kubva nhasi tatanga kutanga kuona ese marudzi emiedzo yekumisikidza yeApple smartphone uye imwe yekutanga kuoneka pamambure ndiyo iyo yavanoedza kukwenya sikirini nemidziyo yekuoma kwakasiyana.
Yakave iri nzira ye JerryRigEverything uyo akaisa basa kuti abate zvisina kunaka iye achangowana iPhone uye uone kuti anokwanisa kutsungirira zvakadii. Chinhu chekutanga chaakaita chiyero chekutanga: iyo iPhone 7 skrini inotanga kukwenya padanho 6, iyo ingori iyo nhanho yekushomeka iyo ine foni yekirasi yayo mune izvi. Mukuenzanisa, iyo Galaxy Note 7, yekutanga kushandisa Gorilla Girazi 5, kukwenya padanho 3.
Iyo iPhone 7 inorovawo iyo Bendgate
Zvinotaridza zvakakosha kutaura zvavanotaura muvhidhiyo, kuti iyo makiyi nemari yesimbi hazvizokwenya skrini yeiyo iPhone 7, asi kuti muhomwe mune kazhinji mhando dzese dzemaminerari ndidzo dzinopedzisira dzanetsa skrini, saka zvichave zvakakodzera kushandisa chero mhando yerudzi rwekudzivirira kana tichizotakura muhomwe dzedu nguva yakareba uye tinoda kuti ive yakakwana.
Zvinhu zvatochinja kuseri kweiyo iPhone 7. Iyo aruminiyamu ichatsemurwa nekukurumidza, asi iri padanho rakaenzana neiyo iPhone 6s. Ivo vanoedzawo iyo yekubata ID uye kamera, ese aine nesafiri girazi uye ayo anonyanya kumira, uye iyo flash uye yesimbi earpiece grill, ese ari maviri zvinhu ane low low kuramba asi iyo isingazove iri yakanyanya njodzi nekuti haina kufanana kureba kupfuura iyo imba / girazi.
Muvhidhiyo isu tinogona zvakare kuona akati wandei bvunzo: kune rumwe rutivi, iyo skrini inopiswa neyakareruka uye zvinoita sekunge inodzokera kune yayo yekutanga mamiriro kana yacheneswa. Ipapo iye zvakare anoita bvunzo kutonga kunze kweiyo Bendgate, asi dambudziko iri ratogadziriswa muma iPhone 6s uye iyo iPhone 7 haikotame nyore. Inotaridzika senge iyo skrini inodzima zvishoma kana paine simba rakawanda, asi inodzokera kumashure kana iwe uchiiburitsa.
Kubva pane izvo zvinoita, iyo iPhone 7 haisi yekuti inopokana kupfuura ma6, asi haina kushoma uye uye, dai pakange pasina dambudziko rekurwisa gore rapfuura, zvinoita sekunge hakuzove gore rino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone Concepts » Iyo iPhone 7 inotarisana neyekucheka, iyo yakareruka uye iyo bendgate mune aya ekutsungirira bvunzo
Muvhidhiyo inoti hapana Kumba kana kamera inoshandisa girazi resafire, iro rakakweshwa padanho 9. Ose ari maviri akakwenenzverwa padanho rechitanhatu, izvo zvinoratidza kuti vanoshandisa girazi rakafanana nechiratidziri.
Iyo iPhone 7 inokurumidza kupfuura chero Apple MacBook Air